तपाईंको भोलीको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस् राशिफल:बि.सं २०७५ चैत १ गते शुक्रबार - Triveni Online
Home / Rashifal / तपाईंको भोलीको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस् राशिफल:बि.सं २०७५ चैत १ गते शुक्रबार
तपाईंको भोलीको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस् राशिफल:बि.सं २०७५ चैत १ गते शुक्रबार
Triveni Online March 14, 2019	Rashifal Leaveacomment
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) व्यवसायिक जीवनमा सफलता मिल्नेछ । समाजमा मान प्रतिष्ठा मिल्नेछ । नयाँ काम सुरु गर्नको लागि राम्रो समय रहेको छ । परिवारमा खुशी छाउनेछ । मनमा शान्ती मिल्नेछ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) लाभ प्राप्त हुनेछ । महत्वाकांक्षा पूरा हुनेछन् । सन्तानका कारण खुशी मिल्नेछ । कुनै नयाँ कामको लागि खर्च बढ्नेछ । आफ्नी आमाको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने समय छ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह)भौतिक सुख मिल्नेछ । आकस्मिक लाभ हुनेछ । सन्तान या माताको स्वास्थ्यले तनाव उत्पन्न हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा प्रशंसा र समाजमा सम्मान मिल्नेछ । शत्रुले खुट्टा तान्ने प्रयास गरेतापनि सफल हुनेछैनन् ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो)व्यवसायमा नयाँ ढंगले काम गर्नको लागि आजको दिन उत्तम रहेको छ । काममा सफलता मिल्नेछ । विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहयोग मिल्नेछ ।
सम्बन्धहरु सुमधुर रहनेछन् । प्रशंसा मिल्नेछ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे)व्यापारमा आज गरेका सम्झौताले राम्रो प्रतिफल दिनेछन् । कामको सिलसिलामा टाढाको यात्रा हुनेछ । काममा मिहिनेत अनुसारको सफलता मिल्नेछ । परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य समस्याले चिन्तित गराउनेछ ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो)विदेशीसंगको सम्पर्कले आर्थिक लाभ मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा निर्णय लिंदा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने छ । सोंच विचारका साथ गरिएको कामले सफलता दिलाउनेछ । जीवनसाथीको स्वास्थ्यका कारण तनाव उत्पन्न हुनेछ ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते)पारिवारिक जीवन अस्थिर रहनेछ । प्रेम समबन्ध सुमधुर रहनेछ । लगनशीलताका कारण आम्दानी बढ्नेछ । कार्यक्षेत्रमा आफ्नो क्षमताले अरुलाई प्रभावित पार्न सकिनेछ । इमान्दारीपूर्ण व्यवहारका कारण प्रशंसा मिल्नेछ
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु)समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्यमा गडबड हुनेछ । भावनात्मक रुपमा कमजोर महसुस हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा बाँधिनको लागि आजको दिन राम्रो रहने छैन । आउनुपर्ने धन रोकिनाले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्नेछ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे)प्रसिद्धि मिल्नेछ । प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको सहयोग मिल्नेछ । नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ । जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ । आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि)व्यापार व्यवसायमा सुधार आउनेछ । आर्थिक लाभ मिल्नेछ । धार्मिक कार्यमा सहभागी भइनेछ । प्रशंसा मिल्नेछ । मानसिक रुपमा शान्ति महसुस हुनेछ । अरुलाई गरिएको सहयोगले आफ्नो प्रतिष्ठा बढ्नेछ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द)आज गरिने सबैजसो प्रयास सफल हुनेछन् । सामाजिक समारोहमा सहभागी भइनेछ । प्रसिद्धि मिल्नेछ । साथीहरुसंगको सम्बन्ध गाढा हुनेछ । परिवारमा खुशी छाउनेछ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि)सबै पक्षबाट लाभ प्राप्त हुनेछ । सहकर्मीको साथ र सहयोग मिल्नेछ । आत्मविश्वास बढ्नेछ । नयाँ कामको सुरुवात गरिनेछ । मान प्रतिष्ठा मिल्नेछ । दैनिक अनलाइनबाट ।
Previous संकट मोचन हनुमान सरी शुख,शान्ति र अटल-अमर बन्न चाहानुहुन्छ भने जप्नुहोस हनुमान जी का १ दर्जन नाम
Next सुत्नुभन्दा अघि बुढानिलकण्ठको दर्शन गरि भोलिको राशिफल हेर्नुहोला, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौ !
पशुपतिनाथको दर्शन गरेर २०७५ चैत २१ गते बिहिबार, आजको राशिफल हेर्नुहोस्
पशुपतिनाथको दर्शन गरेर २०७५ चैत २१ गते बिहिबारको राशिफल हेर्नुहोस्
बुधबारको दिनमा श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ चैत्र २० गते बुधबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।#जय_श्रीकेदारनाथ।।